Home News Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Booqanaayo Xerada Tababarka Ee Turkiga
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Booqanaayo Xerada Tababarka Ee Turkiga
Maxamed Cabdullaahi Farmajo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaaliya ayaa la filayaa in Maanta oo sabti ah uu booqdo Saldhiga Weyn ee Turkigu uu ku leeyahay Magalada Muqdisho.
Saldhigaas ayaa waxaa lagu tababaraa Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya,iyada oo horay Ciidamo loogu tababaray kuwo kalena ay haatan tababar ku qaadanayaan.
Madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu guud ahan kormeeri doona Xarumaha ku yaalla Gudaha saldhiga sidoo kale,waxaa la filayaa in Madaxweyne Farmaajo uu tababar u furo dhalinyaro ku biireysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Waxaa aad loo adkeeyey Amniga Wadada aada Saldhiga Turkiga ee Magalada muqdisho ee marta dhinaca deegaanka Jasiira,iyada oo Saldhiga laga dareemayo diyaar garowga soo dhaweynta Madaxweyne Farmaajo.
Turkiga ayaa dowladda Soomaaliya waxa uu ka caawiyaa dhinacyo badan,waxana uu Gacanta ku hayaa Garoonka iyo dekada Weyn ee Magalada Muqdisho,waxaana sidoo kale uu Muqdisho ka furtay Saldhiga ugu Wweyn ee uu ku leeyahay Qaarada Afrika.
Previous articleWasiir C/fitaax geeseey oo Xildhibaanada Baarlamaanka Maanta Hor-tegaya!!
Next articleGen Andrew oo Muqdisho soo Gaaray ka dib Markii Ciidamada Uganda
Ilhaan cumar oo si rasmi ah loo dhaariyay
Somali President appoints caretaker Prime Minister after Ali Khaire’s ouster